‘डकुमेन्ट्री’ भन्दै मोडलको बलिको तयारी – Mero Film
‘डकुमेन्ट्री’ भन्दै मोडलको बलिको तयारी
- सुजन पन्त
पुस ४ गते दिउँसो झापाकी एन्जिला (नाम परिवर्तन) हतार–हतार महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ पुगिन् । एन्जिलाको अनुहारमा एकखालको डर झल्किन्थ्यो ।
एन्जिला परिसर पुग्दा काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी उत्तमराज सुवेदी कार्यालयमै थिए । तर, व्यस्त । एसएसपी सुवेदीलाई पर्खेर बाहिर नै बसिरहिन् एन्जिला ।
३० मिनेट बाहिर बसेकी एन्जिलालाई एसएसपी सुवेदीले भित्र आउन भने । एन्जिलासँगै उनका भाइ पनि थिए । भित्र छिरेपछि एसएसपी सुवेदीले ‘तपाईंहरुको समस्या के हो ?’ भनेर प्रश्न गरे ।
‘मोडलिङमा लगाइदिन्छु भन्दै एउटा समूहले भारत–नेपाल बोर्डरमा लगेर सुटिङ गर्नुपर्ने भनेपछि शङ्का लागेर यहाँ आएको,’ एन्जिलाले आफ्नो समस्या पोखिन्, ‘मासु–रक्सी खान नहुने भन्छन् । पूजा लगाउनुपर्ने, पूजा लगाइसकेपछि लड्डु खानुपर्ने रे ! लड्डु खाएपछि पुरै बेहोस हुने । भारतमा लुकाएर राखिएको कालो धनहरु कहाँ–कहाँ छ सबै देख्छ । कालो धनलाई सेतो बनाएर नेपाल भित्र्याउने र सबैले मिलेर बाँड्ने रे ।’
एसएसपी सुवेदीले घटनाबारे थप खुलाउन भनेपछि एन्जिलाले घटनाबारे सविस्तार सुनाइन् ।
यसो भन्छिन् एन्जिलाः
एक हप्ताअघि (मंसिरको अन्तिम साता) काठमाडौँमा एक फेसनहाउस सञ्चालन गर्दै आएकी सीता (नाम परिवर्तन) ले फोन गर्नुभयो । फोनमा वहाँले एउटा प्रोजेक्टको लागि ६ फिट हाइट भएको मोडल चाहिएको छ, काम गर्ने हो भनेर सोध्नुभयो ।
मैले हुन्छ भने उहाँले कतै भेटेर कुरा गरौँ भन्नुभयो । मैले अफिसमै भेट्न आउनु भनेँ । सीता बानेश्वरस्थित मेरो अफिसमै आउनुभयो । सीतासँग अन्य ५ जना केटाहरु पनि थिए ।
एउटा प्रोजेक्टको क्रममा सीतालाई मैले ६ महिनाअघि चिनेको थिएँ । त्यतिबेला राम्रो काम भएको थियो । वहाँले फेरि पनि राम्रै काम दिनुहुन्छ भन्ने विश्वासले हुन्छ भनेकी थिएँ ।
सीतासँगै आएका एक युवकले हाइट कति छ भनेर सोधे । मैले ५ फिट १० इन्च भने । उनले ६ फिटकी चाहिएको थियो भने । पछि उनीहरुले भिडियो खिच्दै टेपले मेरो हाइट नापे ।
५ फिट ११ इन्च रहेछ । यत्तिको मान्छे त फिट हुन्छ भन्दै त्यहाँबाट हिँडे ।
एकजना केटाले मेरो फोन नम्बर माग्यो । मैले दिएँ । पछि कामको बारेमा त्यही केटासँग कुराकानी हुन्थ्यो । तर, केटाको नाम मलाई थाहा थिएन ।
बारम्बार प्रोजेक्टको लागि भनेर फोन गर्न थालेपछि ‘काम गर्ने हो भने एग्रिमेन्ट गरौँ’ भनेर भनेँ । तर, उनीहरुले एग्रिमेन्ट गर्न आनाकानी गरिरहे । कामको सबै फर्म्याट दिनु भनेँ । उनीहरुले त्यो पनि केही दिएनन् ।
गत बिहीबार राति घरमा खाना खाएर यत्तिकै बसिरहेको थिएँ । त्यो केटाले फोन ग-यो । मासु–रक्सी खान्छौँ कि खान्नौँ ? महिनावारी भएको छ कि छैन ?’ भनेर सोध्यो ।
मासु–रक्सी पनि खान्न, महिनावारी पनि भएको छैन भनेँ । तर, मलाई प्रश्न अनौठो लाग्यो । ‘यस्तो प्रश्न किन गर्नुभएको’ भनेर त्यो केटालाई सोधेँ ।
‘नेपाल–भारत बोर्डरतिर गएर पूजा गर्नुपर्छ । फेरि त्यस्तो छ भने हाम्रो कुल देवताले मान्नुहुन्न,’ केटाले जवाफ दियो ।
‘पहिले त पूजा गर्ने कुरा नै आएको थिएन’ भनेर सोध्दा त्यो केटाले ‘होइन यो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो । डकुमेन्ट्री जस्तो बनाउँछु । अनि अर्को देशमा लगेर देखाउने हो । त्यहाँ भारतीय र कोरियाका मान्छेहरु पनि आउँछन् । राम्रो भयो भने तपाईंलाई नै फाइदा हो’ भनेर भन्यो ।
सुरुमा मलाई सबैजना नेपाली हुन्छन् । ३०–३५ जनाको ग्रुपमा काम गर्ने हो भनेका थिए । त्यो राति फोनमा फेरि ‘तिमी मात्रै एक्लै हो’ भन्यो । त्यसपछि मलाई शङ्का लाग्न थाल्यो ।
मैले फेरि फोन गर्न खोजेँ । तर, त्यसपछि त्यो केटाको फोन अफ भयो । शुक्रबार बिहानै फेरि त्यो केटा आफैले फोन गर्यो । ‘हामीलाई पनि यो कुरा पहिले थाहा थिएन । यसमा नराम्रो मान्नु पर्ने कुनै कुरा छैन बहिनी,’ भनेर सम्झाउन खोज्यो ।
कसरी थाहा हुँदैन ? एग्रिमेन्ट गर्छु भन्ने मान्छे ऊ, उसैलाई थाहा हुँदैन त ? मलाई शंका लाग्यो र अनि आज म त्यही भएर हजुर (एसएसपी सुवेदी) लाई भेट्न आएको हुँ ।
केही चिनेका ठूला मान्छेहरुसँग पनि परामर्श लिएँ । सबै कुराहरु बुझिरहेँ । बिहीबार चाहिँ अति नै भयो । सहनै नसक्ने भएँ । घरी के–के भनेको छ ।
बलि कि ‘ट्रान्स पार्टी’ ?
रक्सी–मासु नखाएको, महिनावारी नभएको र पूजा गर्नुपर्ने भनेपछि उक्त समूहले एन्जिलालाई कुल देवताको नाममा बलि दिन लैजान लागेको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ । एसएसपी सुवेदी भन्छन्, ‘एन्जिलालाई उक्त समूहले बलि दिनकै लागि सीमा क्षेत्रतिर लैजान खोजेको देखिन्छ । अर्को सम्भावना भनेको फकाएर विभिन्न देशबाट नेपाल आएका विदेशी नागरिकसहितको ‘ट्रान्स पार्टी’ मा लैजान लागिएको हुनसक्छ ।’ ट्रान्स पार्टी एउटा त्यस्तो वयश्क डान्स पार्टी हो जहाँ अनकन्टार ठाउँमा स्वदेशी र विदेशी नागरिकसहित युवतीहरुलाई लगेर कार्यक्रमको आयोजना गरिन्छ । त्यहाँ ड्रग्सको प्रयोग र यौनजन्य गतिविधिहरु हुने प्रहरीको भनाइ छ ।
तर, कुराकानीको विवरण र घटनाक्रम हेर्दा र त्यहाँ कुरा गरिएको ६ फिटको युवती चाहिने, महिनावरी भएको समय हुन नहुने, माछा–मासु खाएको नहुने र कुल पूजा तथा कुल देवता रिसाउने कुरा, पूजापछि लड्डु खानुपर्ने र त्यसपछि बेहोस हुने कुराले घटना बलि दिनकै लागि ‘डकुमेन्ट्रीको नाटक’ गरिएको हुनसक्ने आशंका प्रहरीको छ ।
बिराटनगरमा प्रहरीको अपरेसन
एन्जिलाको सबै कुरा सुनिसकेपछि एसएसपी सुवेदीले तत्कालै घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर्न परिसरका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीलाई निर्देशन दिए । त्यसपछि महानगरीय प्रहरी परिसरका इन्सपेक्टर अनिल ठकुरीको कमाण्डमा ५ जना प्रहरीको टोली एन्जिलालाई साथमै लिएर मोरङतर्फ हिँड्यो ।
इन्सपेक्टर ठकुरीको टोलीले मोरङमा पूरै सर्च अपरेशन चलायो । तीन दिनको अथक प्रयासपछि इन्सपेक्टर ठकुरीको टोलीले घटनामा संलग्न ६ जनालाई विराटनगरबाट पक्राउ गरेर मङ्गलबार साँझ काठमाडौँ ल्याएको छ । यस्तै एकजना काठमाडौँबाट पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेकामध्ये २ जना युवती र ५ जना युवक रहेको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेका ७ जनाको नाम प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरुलाई सार्वजनिक गरिने प्रहरीको तयारी छ ।
एक वर्षअघि पनि झापामा युवतीलाई बलि दिनका लागि यस्तै नाटक रचिएको थियो । तर घटना हुन नपाउँदै जानकारी पाएको प्रहरीले घटनामा संलग्न रहेका ४ जनालाई तत्कालै पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । पछि उनीहरुले आफ्नो अपराधको योजना प्रहरीसमक्ष स्वीकार गरेपछि उनीहरु पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् ।
२०७६ पुष १० गते १४:१५ मा प्रकाशित
त्यसपछि, तारादेवि र नारायण गोपाल जीवनभर बोलेनन् !
मनिषा कोइरालाको समर्थनमा नेपाली कलाकर्मी
बाचुन्जेली स्पट ब्वाइ : राजु भन्छन्-चामल सकियो, कोठाभाडा तिर्ने पैसा छैन !
‘माया नाथे’ बन्ने डरले मनोज बनेका हास्यकलाकार गजुरेल
नायिकाको चरित्रहत्या प्रयासमा चलचित्र कलाकार संघको उजुरी
नवराज विकको समर्थनमा फिल्मकर्मी
‘बारिश २’ को बाकी भाग मे २५बाट निरन्तर
सलमान खानको ‘भाई भाई’ सार्वजनिक
चाम्सको ‘गोर्खा वारियर’ टेस्ट टिजर
देशै रोयो कोरोनाले (भिडियो)
नारायण रायमाझी र शान्ति श्रीको ‘बाचेँ तिम्रो मरे देउताको’